Gbasara Anyị - HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD
Nabata na FIZA Teknụzụ
E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2005 na isi ụlọ ọrụ dị na shijiazhuang nke bụ ebe mara mma nke China. Isi azụmaahịa ahụ gụnyere mmepụta na ire nke kemịkal kemịkalụ na nnụnụ ọkụ na-eri ngwaahịa sitere na ngwaahịa, yana mbupụ nke teknụzụ chlorine dioxide. Anyị ụlọ ọrụ, aiming na otu ebe ọrụ na-adigide mmepe, mgbe niile na-ekwusi ike na okwukwe gbakwasara iji wuo ezi ụlọ ọrụ ika na iji merie ahịa na ndị ahịa na ezi ngwaahịa mma na unreserve ọrụ. Companylọ ọrụ anyị enwetawo ọtụtụ onyinye dịka "shijiazhuang pụrụ ịtụkwasị obi enterprise" ， "ọkwa nke A maka nchekwa nchekwa na ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi" na "ụlọ ọrụ ihe atụ nke owuwu ọdịnala nchekwa". Ugbu a ụlọ ọrụ anyị etoola na ụlọ ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ wee nwee nnukwu otuto na ude.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ alaka na ntọala ntọala niile na mba ahụ, na-enwe usoro mmepụta nke tozuru etozu nke kemịkalụ kemịkalụ na ndị otu ọkachamara maka imepụta ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kemịkal ruo ọtụtụ afọ, ọnụego mbupụ na-anọkwa mgbe niile. nke ụlọ ọrụ. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ enwetawo nnukwu arụmọrụ azụmahịa ma merie aha ụlọ ọrụ dị elu.
N'oge azụmahịa gbasaa, ụlọ ọrụ anyị na-eme mgbanwe na imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ na mba ọzọ, ma mepee mmekọrịta dị mma na ọtụtụ ụlọ ọrụ edepụtara na ụlọ ọrụ mba dị iche iche na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe, Australia, Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara ndị ofesi. .
Guzosie ike ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị nwetara ọtụtụ ndị ahịa na-adịgide adịgide n'ụlọ na mba ọzọ, wee nweta nzaghachi ziri ezi site n'aka ndị ọrụ niile maka usoro mmepụta ihe dị elu, ngwaahịa dị elu na ọrụ dị elu na-arụ ọrụ. Na-aga n'ihu nkwalite nke aha, tinyere na-aga n'ihu mma nke mmepụta Usoro na management, Anyị ụlọ ọrụ ahịa olu na-ebili.
Shijiazhuang pụrụ ịtụkwasị obi enterprise
Akara A maka nchekwa na nchekwa na ntụkwasị obi
Enterdị ihe atụ nke owuwu ọdịnala nchekwa
Njikere ịchọta ihe banyere Anyị?
Ebumnuche anyị bụ "nweta ntụkwasị obi na nkwado gị n'iji ezi obi na ọrụ na ngwaahịa dị mma; baara onwe anyị uru ma rute ọnọdụ mmeri." Companylọ ọrụ anyị dị njikere iji ezi obi na-arụkọ ọrụ na ụdị ndụ niile n'ụlọ na mba ofesi iji mepụta ọdịnihu dị mma!